FIZARANA NY FARITRA VATOVAVY SY FITOVINANY : Nitafa mivantana tamin’ireo Ndrenony sy Ampanjakan’i Manakara, Vohipeno ary Ikongo ny Filoha
Nanohy ny Fitsidiham-paritra tao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany hatrany ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina, tamin’ny faran’ny herinandro teo. 12 octobre 2020
Isany nisongadina ny fihaonana mivantana teo amin’ny Filoha, ireo Ndrenony sy Ampanjakan’i Manakara Vohipeno sy Ikongo niresahana mikasika ny fizaràm-paritra Vatovavy - Fitovinany sy ny fametrahana ny faritra faha-23. Nitokana ny biraon’ny Talem-paritry ny Polisim-pirenena koa ny Filoha ary nametraka ny vatofototry ny Fotodrafitrasa ho fiarovana ny Morontsiraka amin’ny voka-dratsy ateraky ny fiakaran’ny ranomasina sy ireo loza voajanahary. Nisy koa, ankoatra ireo, ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka.
Nitafa mivantana tamin’ireo Ndrenony sy Ampanjakan’i Manakara, Vohipeno sy Ikongo ny Filoha, tamin’ny sabotsy teo, tao amin’ny Tranoben’Antemoro, toerana fakàna tsodrano teo amin’ny vodiranon’i Manakara. Antony fihaonana ny fihainoan’ny Filoha ireo Raiamandreny ara-drazana momba ny fangatahan’ ny distrikan’i Mananjary ny fizaràn’ny faritra Vatovavy-Fitovinany sy hahaterahan’ny faritra faha-23. Tafiditra ao anatin’ny velirano koa izany fametrahana ny faritra faha-23 izany teo imason’ny vahoaka, ka tsy maintsy hajaina sy tanterahina. Tsy maintsy omena voninahitra ny Raiamandreny na afaka manapaka sy mandray ny fanapaha-kevitra feno momba ny fizaràm-paritra aza ny Filoham-pirenena. Nanamafy ihany koa ny Filoha fa fizaràna ara-taratasy ( découpage administratif) no atao eto fa tsy fampisaraham-bazana. Tsy afaka manao zara vilana amin’ny fizaràm-paritra ny Filoham-pirenena, izay hisy fiantraikany amin’ny fanatanterahana ny fampandrosoana amin’ny Faritra roa hizara : Vatovavy sy Fitovinany.
Mifanakaiky amin’i Manakara sy Vohipeno i Ikongo
Misy ny antokon’olona mangataka ny hampidirana an’Ikongo ho anaty fizaràm-paritr’i Vatovavy hiaraka amin’ i Manakara. Raha ny fizaràna ara-jeografia anefa mifanakaiky amin’i Manakara sy Vohipeno Ikongo. Handringa ny fampandrosoana raha toa ka mizara vilana toy izany ny fizaràm-paritra, ohatra ny fanamboarana ny lalana fotsiny. Distrika 6 no mandrafitra ny faritra Vatovavy Fitovinany. Nanambara, araka izany, ny Filoha fa mba tsy hisian’ny fitanilana amin’ny fizaràna ; hizara ho distrika telo avy i Vatovavy (Nosy varika- Ifanadiana- Mananjary ) sy i Fitovinany ( Manakara- Ikongo - Vohipeno). Teny ierana ny fifampiresahana teo amin’ny Ndrenony sy ireo Ampanjaka ary ny Filoham-pirenena, ka nihaino tsirairay ireo ankolafy rehetra zanaky ny faritra momba izany fizaràna izany ny Filoha. Samy nanaiky izany fandaminana izany ireo Ndrenony, Ampanjaka, zanaky ny faritra, Ben’ny tanàna sy ireo Solombavambahoaka.
Hahazo kianja mitafo manara-penitra
Hahazo kianja mitafo manarapenitra ihany koa i Manakara. Tsy hijanona ao an-drenivohitra ny Fotodrafitrasa fa hipaka any amin’ny faritra. Efa an-dalam-pahavitana ny kianja manarapenitra amin’izao izay hahazo ny fankatoavan’ny FIFA, ka afaka handray lalao iraisam-pirenena. Tsy maintsy hovitaina ny hopitaly manarapenitra ao Manakara izay efa vita ny 80% saingy niniana tsy nisy nanohy sy nosimbaina tamin’ny fitondrana teo aloha. Hahazo fitaovam-pitiliana « scanner », « mammographie » sy fitaovam-pitarafana « radiographie numérique » koa ny hopitaly rehefa vita. Efa notolorana « Concentrateur d’oxygène » kosa ny hopitalin’i Manakara amin’izao hiatrehana ny fitsaboana ny aretina Covid-19. Nahazo « ambulance médicalisée » ihany koa ny distrika.
Nitafa tamin’ny vahoaka na alahady aza ny andro
Nitohy tao amin’ny Kaomina ambanivohitr’i Namorona sy Renivohitry ny Distrikan’i Mananjary ny fitsidiham-paritra aty amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, omaly alahady. Toy ny tao Manakara, nisy ny dinidinika nifanaovan’ny Filoha Andry Rajoelina niaraka tamin’ny Raiamandreny, Ampanjaka, Depiote, ireo Ben’ny tanàna ary ny vahoakan’i Namorona. Nandritra izany dinidinika izany no nilazan’ny Filoham-pirenena momba ny tolo-keviny mahakasika ny fizaràm-paritra an’i Vatovavy Fitovinany ka samy hanana Distrika miisa telo avy.
Hanolotra loha-masinina sy "Internet" maimaim-poana
Ho fampiroboroboana ny fizahantany, hanolotra loha-masinina telo ny Filoha hampiasaina amin’ny lalana Manakara- Fianarantsoa. Fanomezana manokana avy amin’ny Filoham-pirenena ho an’i Manakara kosa ny « Wagon à vue panoramique » hoentina hisintonana ny mpizahatany. Napetraka teo anoloan’ny garan’i Manakara ihany koa ny « Hotspot » ; toerana misy ny « wifi » sy ahafahana misitraka fifandraisana amin’ny aterineto na « connexion internet » maimaim-poana ary toerana 130 hafa no mbola hisitraka izany manerana ny Nosy. Notokanana ny marainan’ny sabotsy lasa teo koa Biraon’ny Talem-paritry Polisim-pirenena ao amin’ny Faritra Vatovavy - Fitovinany. Birao fahatelo notokanana. Natao ho antoky ny fandriampahalemana sy ny Polisim-pirenena manakaiky vahoaka ny fotodrafitrasa. Notolorana môtô marika “gasy car” roa ihany koa ny Polisim-pirenena tao an-toerana. Ho fanatsarana ny vokatra mampalaza an’i Manakara toa ny kafe sy ny jirofo dia nanome fampitaovana “motoculteur” sy môtô 30 ny Filoha. Nizara ny jiro hazavana ho an’ny rehetra ihany koa ny Filoha tao amin’ny Fokontany Ampasimandoro.
Nisy tsangan-tanana, nanome tso-drano ny Filoha
Nisy ny tsangan-tanana nataon’ireo Ben’ny tanàana rehetra amin’ireo distrika telon’i Fitovinany manamarika ny fanekena ny fizaràn’i Vatovavy sy i Fitovinany ary tsangan-tanana faharoa manaiky ny hitambaran’Ikongo amin’i Manakara sy i Vohipeno. Nanangan-tanana ho mariky ny fanekena ny fanapaha-kevitra ihany koa ny Solombavambahoaka 5 avy ao amin’ny faritra Vatovavy-Fitovinany ary nanamafy ny fanohanany ny fitondram-panjakana. Tsy misy iadian-kevitra fa ekena ny fanapaha-kevitry ny Filoham-pirenena, hoy ny Ndrenony. Nanome tso-drano ny Filoha ihany koa izy ireo amin’ny fitantanana ny Firenena. Tsy maintsy hotanterahina ny fampandrosoana tsy hita tao amin’ny distrikan’i Manakara hatramin’izay raha ny fanamafisan’ny Filoham-pirenena. Nambarany teo anatrehan’ireo ray aman-drenin’ireo ny asa fampandrosoana hatao any an-toerana. Isan’izany ny fanamboarana ny lalana Farafangana - Vohipeno hatao tara, ka ny orinasa Colas no hanao ny asa fanamboarana. Hamboarina ihany koa ny lalana Sahasinaka – Ambatofotsy, izay efa tsy nisy nanamboatra intsony nanomboka ny taona 1947.
Tokatrano 1 000 nahazo vatsy tsinjo
Distrika isany nahitana ny voka-dratsin’ny covid -19 i Manakara ka nisitraka vatsy tsinjo ireo tokantrano miisa 1000 ho fanombohana. Vokatry ny fifampiresahana teo amin’ny Filoham-pirenena sy ny Banky Iraisam-pirenena dia hahazo ny vola Tosika fameno 100.000 Ariary kosa ny tokantrano maro ao Manakara. Mangetaheta mafy ny hanamboarana ny Tetezan’i Manakarabe ihany koa ny mponina ao an-toerana. Hovitaina ny tetezana raha ny fampanantenan’ny Filoha.
Nahazo tso-drano tao Namorona
Nahazoana tsodrano tamin’ireo Raiamandreny Ampanjaka, olomboafidy ary vahoaka tao Namorona izany toy ny nitranga tany Manakara koa ny Filoha rehefa avy nifampidinika. Ny zavatra iray hafa tena nifatohan’ny dinidinika dia ny fangatahan’ireo Raiamandreny Ampanjaka sy ny vahoakan’i Namorona tamin’ny Filoha Andry Rajoelina ny hiaraka amin’ny Faritra Fitovinany izy ireo rehefa vita tanteraka ny fizaràna mamaritra ny Faritra Fitovinany sy Faritra Vatovavy. Raha tsiahivina ny tolo-kevitry ny Filoha dia Distrika miisa 03 ahitana ny Nosy Varika, Mananjary ary Ifanadina no mandrafitra ny Faritra Fitovinany ary ny Distrika telo hafa ahitana an’i Manakara, Vohipeno ary Ikongo no mandrafitra ny Faritra Vatovavy. Ny Kaominina Namorona anefa dia ao anatin’ny Distrikan’i Mananjary, ka izay no nifantohan’ny dinidinika.
Ny Depiote Norbert voafidy tao Mananjary dia nitsodrano ny fangatahan’i Namorona sy ny Ampanjakany ary ny vahoakany hiaraka amin’i Fitovinany. "Marina ny fangatahanareo satria rehefa dinihina ny saritany dia Namorona no akaiky kokoa an’i Manakara, afaka amboarina ny lalana, ny vahoaka koa dia naneho ny faniriany momba ny fikarakarana taratasim-panjakana fa i Manakara no akaiky, eo koa ny fangatahan’ny Ampanjaka hoe : raha hiaraka amin’i Manakara izahay dia amboary ny lalana Ampasimanjeva - Namorona. Velirano no ataontsika, andefasana fitaovana fanamboaran-dalana ny Governora ary hamboarina daholo ny lalana rehetra ary atao Laharam-pahamehana ny mampitohy an’ Ampasimanjeva sy Namorona mihazo an’i Manakara", hoy kosa ny Filoham-pirenena.
Namangy toerana fitaizana zaza kambana tao Mananjary
Tao Mananjary, nisy koa ny famangiana toerana fitaizana zaza kambana" Centre Tsy manary Zaza" ao Ambatolambo. Ny olan’ny mpitantana ny foibe dia tsy milaza mazava ny Ampanjaka raha azo atao na tsia ny mitaiza zaza kambana ao Mananjary. Hany ka raha misy miteraka kambana dia mbola voahilikilika eny anivon’ny fiarahamonina ny mitaiza zaza kambana. Noho izany dia tonga manatitra ny zanany eto amin’ny foibe ireo mananjanaka kambana. Miisa 28 mianadahy no tezain’ny ivon-toerana ao miaraka amin’ny ray aman-dreniny. “Ny antony hitsanganan’ny ivon-toerana dia hiarovana an’ireo fianakaviana ireo tsy ho voahilikilika ny zaza kambana sy ireo ray aman-dreniny", hoy ny mpitantana.
Fanolorana Vatsy tsinjo tao Mananjary
Nisy koa ny fanolorana Vatsy tsinjo ho an’ireo vahoaka sahirana tao Mananjary. “Anjarako no manampy anareo satria nanampy ahy ianareo tamin’ny fifidianana. Fotodrafitrasa maro no hatsangantsika eto", hoy ny Filoha. Namaly ny hetahetan’ny Ampanjaka fony kandidà ny hametrahana ny faritra faha-23 ny Filoha. “Rehefa tanteraka ny Faritra faha-23, Faritra Vatovavy dia i Mananjary no hatao Renivohitra. Tsy hadino intsony i Mananjary fa tsy maintsy mandroso" . Ho famaliana ny hetahetanareo Raiamandreny Ampanjaka ihany dia : tsy maintsy lalàna no hamaritana izany fanomezana ny Faritra faha-23 izany
Nanolotra kamiao ho an’ny Kaominina Mananjary
Nanolotra Kamiao fanangonana fako iray ho an’ny Kaominina Mananjary koa ny Filoha. Misy dababe fasiana fako miisa 5 miaraka aminy. "Diovy ny tanàna. Hampan drosoantsika ity faritra ity ary tsy maintsy mandroso", hoy hatrany ny Filoha. Nangataka koa ny tanora ny hisian’ny kianja manara-penitra eto Mananjary ary namaly izany ny Filoha. “Nanao velirano taminareo aho fa tsy maintsy apetraka eto izany fotodrafitrasa izany. Ankehitriny efa vita hatrany amin’ny 70 % ny fanamboarana izany. Rehefa vita izany dia entintsika eto ny ekipan’ny Barea dia manao fetibe isika”, araka ny nambarany. Manoloana ireo fitarainana marobe mikasika ny fanimbana tontolo iainana ataon’ireo teratany vahiny mpitrandraka volamena ao anatin’ny Distrikan’ i Mananjary dia nanambara ampahibemaso ny Filoha Andry Rajoelina fa : "Tsy maintsy mitsahatra tanteraka izany".
Tsy mbola nisy Filoham-pirenena nitsidika
Tao Namorona dia mbola tsy nisy Filoham-pirenena nandalo na nanitsaka hatramin’izay. Raha nisy dia nanao fampielezan-kevitra. “Tonga eto aho androany ary hametraka fotodrafitrasa maro eto. Mahalala ny maharary anareo aho ary mahafantatra ny tena andrasanareo”, hoy kosa ny Filoham-pirenenra raha nandalo tany an-toerana. Atomboka ny fampandrosoana ny fanamboarana ny Tranobe atao trano vato faran’izay tsara ny ao anatiny ary hotokanana amin’ny fomba manetriketrika. Ankoatra izay dia asiana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro hanazava ny tanàna rehetra. Hatsaraina tahaka izany koa ny hopitaly ary hametrahana fampiterahana na "maternité" sy atao maoderina misy trano fitarafana sy fandidiana. Toy izany koa ny sekoly. Atao manara-penitra ny sekoly Epp eto amin’ity Kaominina Namorona ity. “Isan’ny Kaominina mamokatra i Namorona. Hitako avy eny ambony angidimby fa mamboly lavanila, jirofo....ary manao fiompiana omby ianareo. Hasiantsika fitaovana fitrohana rano na “station de pompage” goavana, mandeha amin’ny herin’ny masoandro eto Namorona mba hahafahantsika manondraka ireo lemaka misy fambolena. Ao ny minisitra hanatanteraka izany”, araka ny nambaran’ny Filoha.
Mikasika ny fandriam-pahalemana, tsy ankinintsika amin’ny mpitandro filaminana irery, fa isika rehetra tompon’andraikitra amin’izany avokoa., hoy ny voalaza. Hametraka Borigadin’ny Zandarimaria any an-toerana ny Fanjakana hanafoana ny halatra lavanila sy jirofo.... Hisy koa ny fanofanana ny tompon’andraikitra isaky ny 6 volana. Maro amin’ireo vahoakan’i Namorona, no tsy mbola manana jiro. Mandra-pahatonga an’ilay andrin-jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro dia efa nitondra hazavana ny Filoha. Jiro mandeha herin’ny masoandro ihany koa izy io. Matanjaka ary mateza hatramin’ny 5 taona. Amin-kafaliana no hizaràna izany aminareo eto Namorona. Nandritra ny fandalovana tao amin’ity tanàna ity. Nitafa tamin’ireo maherifo koa ny Filoha. Menalamba 5 mirahalahy sy Ampanjaka 49 no nahazo fanomezana avy aminy.